Maxkamada Caalamiga Ah Ee ICC Oo Sheegtay Inay Diirada Saareyso Qaaditaanka Dacwadaha La Xidhiidha Deegaanka Iyo Dhulalka Sida Sharci Darrada Ah Lagu Qaato | Berberatoday.com
Maxkamada Caalamiga Ah Ee ICC Oo Sheegtay Inay Diirada Saareyso Qaaditaanka Dacwadaha La Xidhiidha Deegaanka Iyo Dhulalka Sida Sharci Darrada Ah Lagu Qaato
September 16, 2016 - Written by Berbera Today
Hegue(Berberatoday.com)-Dacwad oogeyaasha maxkamada caalamiga ah ee ICC ayaa sheegay inay diirada aad u saari doonaan dacwadaha la xiriira deegaanka ama biiada iyo dulalka sida sharci darrada ah lagu qaato.
Haweeneyda ugu sareysa dacwad soo oogeyaasha ICC Fatou Bensouda ayaa sheegtay inay aad diirada usaarayaan iminka dacwadaha ka dhanka ah burburinta biiada iyo sida sharciga aan waafaqsanayn ee loo daldasho kheyraatka dabiiciga ah.
Dacwad oogeyaasha maxkamada caalamiga ah ee ICC ayaa sheegay inaysan jirin shirkado reer Galbeed ah oo doonaya in lagu soo oogo dacwado dhibaatooyinkaa kusaabsan in kastoo dhibaatooyin badan oo caynkaa ah ay ka geystaan qaaradaha Aasiya (Asia) iyo Afrika.
Caalamka oo idil waxaa soo badanaya tuulaley ama reer baadiye ka cabanaya in dhulalkii awooweyaashood kunoolaan jireen laga eryay dibadana lagu soo tuuray oo aysan aqoon si ay u noolaadaan! Dad badan ayaa la dilay ayagoo dhulalkooda difaacaya.
Madaxda shirkadaha iyo siyaasiyiinta dhulalka qasabka ku qaata, guba dhirta dabiiciga ah ama sumeeya ilaha biyaha laga helo ayaa dhawaan durba waxaa laga yaabaa in lasoo taago maxkamadaa ICC oo kutaala Holland gaar ahaan magaalada Hague ayaga iyo dembiileyaasha kale iyo kaligii taliyeyaasha.